Andriamifidisoa Zo · Jolay 2018 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Jolay, 2018
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Jolay, 2018
Palestina: Deir Yassin, notsarovana in-60 mihoatra
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana07 Jolay 2018
Manamarika ny fandripahan'olona tao Deir Yassin, izay namonoan'ny kômandôn'ny Irgun (tarihin'i Menachem Begin) sy ny Stern Gang vao maraimbe ireo Palestiniana miisa 100 tany ho any ny andron'ny 9 avrily . Mahatsiaro izany ny bilaogera
Kianin'ny manampahefana ny fandrindran-kafanan-drivotra rehefa latsaka ao anaty aizina i Azerbaijan
Azia Afovoany sy Kaokazy04 Jolay 2018
"Vantany vao re tao amin'ny telefônina izy dia ny hafanana ao amin'ny fonja no hany voalazany. "
Tamin-tsiky sy fireharehana no nandaozan'i Però ny Mondialy FIFA Rosia 2018
Amerika Latina03 Jolay 2018
Nihintsana tamin'ity mondialy football ity i Però. Saingy ambonin'izany rehetra izany, tohanan'ny iray amin'ny vondrona mpiondana tsara indrindra tsy mbola hita nandritra ny mondialy.
Nidina an-dalambe am-pilaminana ny Ogandey ho fanoherana ny famonoana olona manao ho lasibatra ny vehivavy
Afrika Mainty02 Jolay 2018
Ary dia nanao ny dia(be) aho. Ho fahatsiarovana azy ireny, tsy nahazo rariny ry zareo ary mbola tsy nisy ny voatazona ho tompon'antoka tamin'ny fahafatesana mampaha-marikoditra nahazo azy ireny. Fa omeko voninahitra ry zareo.